Trionn Design Ukuklanywa Kwewebhusayithi - Umagazini Design
Ukuklanywa Kwewebhusayithi I-canvas emhlophe inikeza isizinda esifanele ukwakha kuso. Inhlanganisela yombala omnandi ushukela inikezela ngento enhle yokubamba ukunaka edonsela isibukeli. Ukuhlanganiswa kwamafonti we-serif nama-sans serif kanye nesisindo nemibala kwenza ukuhlangana okunekhanda okukhohlisa isibukeli ukuthi sikuhlolisise. I-HTML5 animation ye-Parallax iwebhusayithi ene-Responsive, Sine-Staff Vector Character Design Design yethu. Idizayini yayo eyingqayizivele Ngombala ogqamile enezithombe ezinhle nezishelelayo ..
Igama lephrojekthi : Trionn Design, Igama labaklami : Sunny Rathod, Igama leklayenti : TRIONN DESIGN.
Iwebhusayithi nokwakhiwa kwewebhu
Ukuklanywa Kwewebhusayithi Sunny Rathod Trionn Design